देउवा भेटेपछि जिल्ला सभापतिहरु लुत्रुक्कै ! – सजल सन्देश
देउवा भेटेपछि जिल्ला सभापतिहरु लुत्रुक्कै !
By Sajal sandesh	 On२५ पुष २०७६, शुक्रबार ०५:१२
काठमाडौं – पर्दा पछाडी जे सुकै कुरा गरेपनि सम्मुखमा हुँदा मान्छेले कसरी काँचुली फेर्छ भन्ने कुरा काँग्रेसभित्र देखा परेको छ । शक्तिका अगाडी मान्छे कतिसम्म लत्राकलुत्रुक्क हुन्छन भन्ने उदाहरण अहिले काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुलाई हेरे पुग्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी निर्णय भन्दै उनीविरुद्ध मोर्चा कस्न रामचन्द्र पौडेल र सिटौला पक्षले पार्टी मुख्यालय सानेपामै तीन दिनसम्म जिल्ला सभापतिको भेला गरे । आफु निकट जिल्ला सभापतिलाई भेलामा बोलाएर उनीहरुले सभापति देउवा र उनको कार्य शैलीप्रति चर्काे असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
‘यसरी पार्टी चल्छ, पार्टी सभापतिको यो हुकमीशैली भयो, अरुले अधिनायकवाद लाद्न खोजे भन्ने आफैंले पार्टीभित्र लादेको नदेख्ने ? यसरी पार्टी चल्छ ? चल्दैन् । अब हामीले पाता कस्नुपर्छ सभापतिको’ जिल्ला सभापतिहरुको अगुवाई गर्न सधै माहिर मानिएका नुवाकोट काँग्रेस सभापति जगदिशनरसिंह केसी सानेपा काँग्रेस सभापतिहरुको भेलामा बोल्दै थिए ।
काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका सहोदर भाई जगदिशनरसिंह केसी अरु जिल्ला सभापति भन्दा अलि कडा देखिएका थिए । उनको स्वभाव पनि हो । तर तिनै केसी बिहिवार काँग्रेस सभापति देउवाका अगाडी भने लत्र्याक लुत्रुक परेर प्रस्तुत भएको सहभागी एक जिल्ला सभापतिले बताए । पौडेल सिटौलाको निम्तोमा काठमाडौंमा आएका सभापतिहरुलाई सभापति देउवाले हिजो बिहिवार आफ्नै निवासमा लन्च मिटिङ राखेका थिए ।
‘केही कुरा म पहिले राख्छु, त्यसपछि तपाईहरुका कुरा सुन्छु ’ भन्दै देउवाले शुरुमै आफुलाई जिल्ला सभापति भेलामा किन नबोलाएको ? बोलाएको भए म पनि आउथे नी भन्दै कुरा राखेका थिए । देउवाले पार्टी महाधिवेशन बाहेक अन्य विषयमा आफु निर्णय सच्चाउन तयार रहेको तर त्यसका लागि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष सहमतीमा आउन तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि सानेपा भेलामा चर्का भाषण गरेका नेताहरु एकाएक गल्न थाले । ‘सभापतिको कुरा सन्दा यो ठीक, उताका कुरा सुन्दा उतैका ठिक भन्ने जस्तो मात्र भयो, मिलेर जानुको विकल्प छैन, मिलौं सभापति जी ? सहभागी एक जिल्ला सभापतिले भने । प्रत्युत्तरमा देउवाले भने– मैले कँहा नमिल्यौं भनेको छु र छलफल गर्न, पार्टी बैठकमा उहाँहरु (पौडेल पक्ष) आउनु प¥यो नी ।
जग हसाएर मात्र हुन्छ ? देउवाको जवाफ पछि नुवाकोट काँग्रेस सभापति गलेर देउवाका अगाडी लत्रयाकलुत्रुकै परेका थिए । ‘सभापतिका कुरा ठीक छन् । राम्रो छ । सकारात्मक हुदैछ भने आवेशमा कोही पनि आउनुहुन्न ।
मिल्ने कुरा नै हुंदा राम्रो,’ जगदिश नरसिंह केसीले भने । केसीको सानेपामा भाषण सुनेका र बुढानिलकण्ठको प्रस्तुती देखेका एक जिल्ला सभापतिले भने,–‘पावरका अगाडी कसैका केही नलाग्ने रहेछ भन्ने छर्लंगै, नुवाकोट सभापतिले बोल्दा सबै देखियो । उहाँ त लुत्रुक्कै पर्नुभयो ।’
दानबहादुरले छोडे चितवन, अब चितवन प्रहरी प्रमुख को होला ?
कक्षाकोठा भित्रै छाता ओढेर पढन बाध्य विद्यार्थी